शीर्ष मा डट्स संग जर्मन पत्र एक सम्पूर्ण रूपमा भाषाको लागि ठूलो महत्व छन्। शब्दहरू एक ठूलो संख्या तिनीहरूले संरचना मा छ, र यसैले तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न र कहाँ जान्नु आवश्यक छ।
को umlaut के हो
जर्मन शब्द "umlaut" अर्थ "उत्परिवर्तन" बाट अनुवादित। सिद्धान्त, यस परिभाषा शब्द को अर्थ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। Umlaut - स्वरवर्णको मा articulation मा फोनेटिक परिवर्तन र Timbre गर्न इशारा चिन्ह। यी पत्र "एक", "ओ" र "यू" समावेश गर्नुहोस्। Ü एक, ओ,: पत्र मा, तिनीहरूले निम्नानुसार छन्। यदि संग माथिको ट्रान्सक्रिप्सन मा, त्यसपछि हामीले निम्न संयोजन प्राप्त अंक जर्मन पत्र को अनुवाद: = AE; p = ँ; U = ue। शब्द प्रयोग गरिएको छ जसमा आदेश पत्र वा त्यो आधारमा फरक र उच्चारण हुनेछ। तथापि, धेरै। ज्यादातर "एक" नजिक गर्न "ई", "हे" उच्चारण - रूपमा "ई" र "यू" - "यू" को रूपमा।
किबोर्ड मा सेट
जर्मन भाषा को अध्ययन पछि लाग्ने र जर्मनी को आदिवासी बासिन्दाहरू कसैलाई संग अनुरूप, त्यहाँ कुख्यात umlauts टाइप गर्न आवश्यक छ। साथै - र पत्र "Eszett" (ss सबै सामान्य "बेटा" जस्तो देखिन्छ)। किबोर्ड माथि डट्स संग जर्मन अक्षरहरू म कहाँ पाउन सक्छौं? यो मुद्दा धेरै गर्न चासो छ, तर यहाँ तपाईं मात्र सेटिङ र लेआउट सेटिङ परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। थप र किबोर्ड अनुरूप खरिद गर्न आवश्यक हुनेछ - सुविधाको लागि। ue, AE, ँ - यदि यो सम्भव छैन, तपाईंले बस अक्षरहरू संयोजन मा, पहिले उल्लेख रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। एक "Eszett" सामान्यतया दुई पटक एउटै कुरा हो, र "को" हो। त्रुटि लेख्दै लागि छलफल गरिने छैन, कुनै पनि जर्मन यस्तो शब्द (: "Fußball" = "Fußball" जस्तै फुटबल) बुझ्न हुनेछ।
तर, एक व्यक्ति छ भने लेखन जस्तै "आँखा कटौती", वा उनले साक्षरता रुचि र जर्मन Dunno अघि देखा पर्न चाहनुहुन्छ छैन, त्यहाँ तपाईं सन्देशहरू वा पाठ टाइप गर्दा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अलि गोप्य छ। तपाईं बस नाम "जर्मन वर्णमाला" कुनै पनि ब्राउजर अनुरोध खोज पट्टी टाइप र खोज मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि, आँखा तपाईं के आवश्यक छ हेर्न। कि, वर्णमाला छ। तपाईँ यसलाई खोल्न र साथ माथिको अंक जर्मन पत्र प्रतिलिपि गर्न आवश्यक छ। यो हरेक समय के गर्न, तपाईं एक अलग फाइल, वा पुस्तकचिनो मा या त तिनीहरूलाई बचत गर्न सक्नुहुन्छ। तर राम्रो, पाठ्यक्रम, एक जर्मन लेआउट सेट। तपाईं बस "सुरुवात" बटन मार्फत नियन्त्रण प्यानल जाने यो त गाह्रो छैन, त्यसपछि "क्षेत्रीय र भाषा विकल्पहरू" र स्थापित सेवा मार्फत भाषा सेटिङहरू थप्न वस्तु पाउन। सामान्यतया रूसी किबोर्ड "एक" पत्र, मा जान्छ "ई", "हे" - एउटै ठाउँमा र "फा", "यू" - "एक्स" र "बेटा" (Eszett) को "ड्यास" मा लगे छ। समय, यो लेआउट तपाईंले प्राय umlauts प्रयोग विशेष गरी भने, प्रयोग गर्न सकिन्छ।
र, अन्तमा, संग माथिको अंक जर्मन पत्र द्वारा प्ले भूमिका बारे। ठूलो र सानो umlauts धेरै महत्वपूर्ण छन्। शब्द मा पत्र बिन्दु सेट वा छैन कि मा, शब्द को अर्थ मा निर्भर गर्दछ। जर्मन umlauts र उच्चारण रूसी बीच, तपाईं एक समानान्तर आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, मात्र स्वरको आरोह अवरोह हामी बनाउँछ ढोका लक पुरातन महल मा। एक जर्मन दुई अंक एक "सुन्दर" मा "पहिले नै" बनाउन सक्छ। हामी शब्द "SCH (ओ / O) N" बारे कुरा गर्दै छन्। "Schon" "पहिले नै" को रूपमा अनुवाद गरिएको छ ( "पहिले नै काम" - "arbeite schon"), एक "schön" - "सुन्दर" को रूपमा ( "Du bist sehr schön" - "के तपाईँ सुन्दर हुनुहुन्छ")। यसलाई सही यी शब्दहरू लेख्न मात्र होइन, तर पनि तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। विशिष्ट सामाग्री को राम्रो Assimilation लागि, यो भने जर्मन भाषाको लागि शिक्षक जान कुनै मौका छ रेकर्ड सुन्न सिफारिस गरिएको छ। निस्सन्देह, तपाईं शब्द र transcriptions पढ्न सक्नुहुन्छ, तर अक्सर विद्यार्थी धेरै स्पष्ट umlauts संग पत्र उच्चारण गर्न थाल्छन्। त्यो, यो "ई", उच्चारण "W" र विशेषता "ई" छ। यो भद्रताका साथ र नरमररुपले बोली को ध्वनि जस्तै हुनु हुँदैन। आज भिडियो र अडियो पाठ को एक ठूलो रकम छ। उच्चारण मा धेरै प्रशिक्षण सत्र पछि, तपाईंले पहिले नै नतिजा सुन्न हुनेछ।
शक्ति flatworms। फिड flatworms?
चिल्लो मांसपेशी तन्तु: संरचनात्मक सुविधाहरू। को चिल्लो मांसपेशी तन्तु को गुण
"नयाँ स्पाइडरम्यान": को गाइड, समीक्षा
लिली नाम। महत्त्व र गुप्ति
लुगा धुने मेसिन "हंस": निर्देशन टिप्पणीहरू। त्रुटि कोड, मर्मत
बोरिस चर्टोक, सोभियत र रूसी वैज्ञानिक-डिजाइनर: जीवनी, कार्यहरू
सङ्कलन बिल्ला ज्ञान विस्तार
जीवन लक्ष्य किन आवश्यक
स्पेनी फुटबल खेलाडी मिशेल Salgado: जीवनी, तथ्याङ्क